The Lion with the Red Eyes - World Stories
This is how other readers feltPlus 3721 othersShare this story:
The Lion with the Red EyesEnglishSomali
Bahdoon was welcomed back into the pride and became the most celebrated warrior of the village. The lions were very sorry that they had sent him into the jungle, and they realised then that just because he was different it did not mean that he should be treated differently. At last, the brave lion was accepted by the pride and for the first time in his life he felt like he belonged. Bahdoon had finally returned home. Find out more about the contributors
Libaaxii Indhaha Guduudnaa
Waxaa qoray Aamina Shirdoon
Bari hore, ayaa waxaa jiray tuulo yar oo ku taala Soomaaliya Bariga Afrika. Cidhifka tuulada waxaa jiray dhulbeereed hodan ah meeshaas oo ay dadku ka beertaan dalaggooda ooyna ku raacdaan idahooda. Tuuladu aad ayay u qurux badnayd laakiin sidoo kale waxay ahayd mid khatar badan, mararka qaarna waxaa adkayd in laga ilaaliyo dalagga iyo idaha tuulooyinka dariska ah ama tuugta khatarta ah. Xataa waxaa jira sheeko ku saabsan jin kaasoo soo baxa habeynkii oo guba dalagga oo cuna dhamaan adhiga.
Si looga difaaco khataraha, dadka tuulada waxay korsadeen libaaxyo marka ay dhasheen kuwaasoo ka dib noqday ilaaliyayaasha dhulka. Libaaxyadu way xoog badnaayeen waana lagu nastay waxayna ilaaliyaan dalagga iyo xayawaanka waxayna ka dhigeen tuulada amaan. Waxay isku ahaayeen daacad waxayna u dagaalamayaan inay naftooda huraan haddii looga baahdo.
Laakiin maalin, libaax yar ayaa dhashay kaasoo ka duwan kuwa kale, aan lahayn sharafta raxanta kale, libaaxan waxuu ku dhashay indho guduudan kuwaas oo u ifaya sida dabka. Libaaxyada kale way dhibsadeen waxayna sidaa darteed oogu magacaabeen libaaxii qalaadaa Bahdoon taasoo micnaheedu yahay wax meel qalaad ku dhashay. Waxay u bixiyeen libaaxa yar Bahdoon sababtoo ah waxay ka naxsanaayeen sida haddii uuna u raacin tuulada.
Bahdoon noolashu ooma sahlanayn, waxaa loola dhaqmay si xun abidna looma oggolaan inuu la ciyaaro libaaxyada yaryar ee kale. Waxuu u koray si kalinima ah waxuuna badanaa xasuusna in uu qalaadyahay. Indhihiisa guduudan waxay ka saartay raxanta kale libaaxyada yaryar ee xaasidiinta ahna waxay badanaa oogu yeedhaan magacyo wayna ku jeesjeesaan.
Oogu danbeyntii waxaa la go’aamiyay in Bahdoon ay tahay in laga masaafuriyo raxanta, sidaa darteedna waxaa loo sheegay inuu ka tago tuulada oona waligii ku soo noqon.
Maskiin Bahdoon waxuu galay hawdka si uu ubilaabo noolashiisa cusub ee kalinimada ah. Aad ayuu u murugooday, badanaana aad buu u cidloodaa, laakiin oogu yaraan lama joogaan libaaxyadii kale kuwaasoo badanaa ku maadsan jiray indhihiisa guduudan oo badanaa xasuusin jiray in uu ka duwanyahay.
Sanado ayaa la dhaafay Bahdoona wuu weynaaday, waxuu noqday libaax xoogan. Waxuu yaqaanaa ugaadhsiga waxuuna naftiisa ooga sameeyay noolal hawdka dhexdiisa. Laakiin badanaa waxuu ahaa kali waxuuna badanaa tagi jiray cidhifka hawdka habeenkii si uu u soo eego tuuladiisii hore. Waxuu ku farxaa libaaxyada geesiyiinta ah ee ilaalada ka haya xayawaanka iyo dalagga, waxuuna aad u jeclaaday in uu ku soo biiro oo dib loo oggolaado ka mid noqoshada raxanta.
Waxay ahayd habeyn uun in uu markii oogu horaysay Bahdoon arkay jin daran oo ka soo daganayaa cirkaa oo madaw oo weeraraya tuulada, ku gubaya guryaha iyo dalagga olal ka soo baxaya afkiisa, oo ka dafaya idaha dhulka ciddiyihiisa fiiqan inta uuna bixin habeenku.
Libaaxyadu waxay sameeyeen dadaalkooda oogu wanaagsan si ay u difaacaan tuulada, laakiin jinku waxuu ahaa mid aad u dhakhso badan oo aad u awood badan. Libaaxyo badan waa la dilay habeenkii koobaad Bahdoon waxuu ka daawaday hawdka asagoon waxba caawinaynin.
Jinku waxuu soo weeraray markale habeenkii xigay, waxuu soo weeraray marar badan, ilaa ay dadka tuuladu ay aad ooga cabsadeen inay ka soo baxaan guryahooda. Xayawaan badan way tageen, libaaxyadiina si weyn ayay u wax yeeloobeen ayagoo isku dayaya inay difaacaan tuulada; intoodii badneyd waa la dilay inta hadhayna si xun ayaa loo dhaawacay. Tuuladu kama badbaadin weeraro badan oo uu ku soo qaaday jinka daran, qaar dadka tuulada ahna xataa waxay xidhxidheen alaabadooda waxayna u qaxeen hawdka si ay u badbaadaan.
Maalintii shanaad, Bahdoon wuu u adkeysan kari waayay inuu arko waxyeelada tuuladiisii hore marnaba, sidaa darteedna libaaxa geesiga ah waxuu naftiisa oogu dhaartay in uu difaaci doono dadkiisa iyo raxantiisa dhibna ma lahan khaladkii ay horay ooga galeen.
Habeen kaas, Bahdoon waxuu u soo gurguurtay meel ku dhaw tuulada ooy qariyeen geedo dheer dheer kuwaas oo ku safan cidhifka hawdka. Waxuu ku ilaaliyay hal il ah cirka madaw xilliga oo dhan waxuuna dhagaystay shanqadha baalasha jinka ee dhexmaraya hawada. Wuu xooganaa wuuna go’aansaday, waxuuna u sheegay naftiisa in uu caawa burburin doono jinka daran oo uu ku soo dabaali doono nabad tuuladiisa uu jecelyahay markale.
Si dhakhsa ah, Bahdoon waxuu maqlay shanqadha baalasha xagga sare. Waxuu kor u eegay cirka madaw waxuuna arkay humaagta jinka daran ee u soo daganaya jihada tuulada: ciddiyihiisa dheer dheer waxay u iftiimayeen caddaan dhalaalaya sida dayaxa, indhihiisa waxay ka baadhayaan dhulka wax cusub oo la cuno, wuu gaajoonayaa wuuna cabsi galinayaa. Hadaba Bahdoon waxuu isku geystay dhamaan awoodiisa, dhamaan geesinimadiisa iyo go’aankiisa. Mar alaale marka uu jinku ku soo dagtay tuulada dusheeda, Bahdoon waxuu weerar ka soo qaaday hawdka wuuna hinraagay asagoo wata dhamaan calool adeegiisa. Jinku waa fajacay wuuna baqay inuu arko labo indhood oo olal ah oo ka soo baxaya hawdka, iyo hiinraaga libaaxa geesiga ah ayaa cabsi ku riday calool jileeciisa.
Bahdoon wuxuu u booday hawada waxuuna ku duubay cidiyiihiisa xooga badan seynta jinka waxuuna ku soo tuuray bahalka dhulka. Libaaxa geesiga ah iyo jinka shaydaanka ah ee daran waxay galeen dagaal, laakiin si dhakhsa ah jinka waxaa ka tagtay awoodiisii markii uu ka hor yimid dagaalyahan xirfad leh.
Bahdoon wuu ka xoogbatay wuuna ka geesisanaa jinka kaasoon loo isticmaalin ka hor imaad sidan oo kale ha. Indhaha gaduudan ee bahdoon waxuu ifiyaa habeenka si uu oogula dagaalamo jinka, waxayna si dhakhsa ah dadka tuulada ooga soo baxeen guryahooda waxayna bilaabeen inay ku farxaan Bahdoon kaasoo sameeyay dagaalka geesinimada libaaxa tan xataa oogu adag.
Oogu danbeyntii, Bahdoon waxuu ku guuleystay dagaalka waxuuna dilay jinkii. Sidoo kale xoogaw libaaxya ah oo hadhay waxay ku farxeen geesinimada Bahdoon dhamaantoodna waxay u dabaal dageen guushiisa uu ka guuleystay bahalka. Tuuladu waxay noqotay amaan markale kuwii u qaxay hawdkana waxay ku soo noqon karaan guryahooda oogu danbeyntii waxayna bilaabi dib u beeridda dalaggooda iyo u korinta baraar iyo waxaro inay noqdaan adhi sidaa darteed waxay haysan karaan markale caano iyo burcad ay cunaan.
Bahdoon waxaa dib loogu soo dhaweeyay raxanta waxuuna noqday dagaalyahanka loo dabaaldago ee tuulada. Libaaxyadu aad ayay ooga xumaadeen in ay u diraan hawdka, ka dibna waxayna garawsadeen madaama uu ka duwanyahay inayna ahayn in loola dhaqmo si duwan.
Oogu danbeyntii, libaaxa geesiga ah waxaa loo oggolaaday raxanta waxayna ahayd markii koobaad ee noolashiisa uu dareemay inuu xigto leeyahay. Oogu danbeyntii Bahdoon waxuu ku soo noqday wadanka. Other Somali StoriesA Lesson of Tit For Tat